किन मनाइन्छ तिहार : यस्तो छ तिहार पर्वको महिमा Setokhari ::. News Portal
शनिबार, जेठ ७, २०७९ ०२:०५:४४
तिहार नेपालीहरुको दशैं पछिको सबैभन्दा ठूलो सिंगो नेपाली मानव सभ्यताकै सांस्कृतिक पर्व हो । यो पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशीका दिन काग तिहारको नामले शुरु भएर कार्त्तितक शुक्ल पक्षको द्वितीया तिथिको भाइटीकासम्म (पाँच दिन) मनाइन्छ ।
पाँच दिनसम्म मनाइने भएकाले यसलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ । यमराजले आफ्नी बहिनी यमुनाका घरमा आतिथ्य ग्रहण गरेको हुनाले यी पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिएको हो भन्ने पौराणिक मान्यता रहिआएको छ । तिहार भनेको प्रकृतिपूजक पर्व पनि होरु। वर्षभरि काममा लगाइने जीवजन्तुदेखि सन्देशबाहक पन्छी काग र पानीको प्रमुख स्रोत मानिने पर्वतको पुजा गर्नु भनेको प्रेम, सद्भाव र मैत्रीको प्रतीकसमेत हो ।
हिन्दू धर्मावलम्वीले दीपावली (दिवाली) को रुपमा यस पर्वलाई नेपाल लगायत बिश्वका थुप्रै देशमा धूमधामसाथ मनाइन्छ । यसलाई दीपावली अनि दिवाली नामले पनि चिनिन्छ । यही दिन भगवान् धनवन्तरीको जन्म भएको हुनाले यसलाई धनवन्तरी जयन्ती वा धनतरेस पनि भनिन्छ । यसै दिन साँझमा घरको मूलद्वारको सामु
यमराजलाई दीपदान गर्नाले मृत्युदेव प्रसन्न भई आरोग्यता तथा दीर्घजीवन प्रदान गर्छन् भन्ने विश्वास छ । त्यो घरमा कहिल्यै पनि अपमृत्यु वा अल्पमृत्यु हुँदैन भन्ने मान्यता छ । यमपञ्चकमा क्रमशः काग, कुकुर, गाई र लक्ष्मी, गोरु–गोवर्धन र भाइ पुजा गरिन्छ । तिहार रंग, फूलमाला, उज्यालो र विभिन्न पूजाआजाको पर्वमा हो जसमा पिङ खेल्ने, दीपावली गर्ने र देउसीभैलो खेल्दै सेलरोटी आदि मिष्ठान्न खाई भब्य रुपमा हर्षोउल्लासका साथ रमाइलो गरि मनाउने गरिन्छ ।
तर, अहिले कागका लागि भात, रोटि मिठाईं तथा विभिन्न परिकार थाल वा दुना वा टपरीमा छ्तमा वा बाहिर राखिदिएर पूजा गर्ने चलन छ । यसैदिन साँझ यमराजको नाममा घरको चोक आगन आदि स्थानमा बत्ती बाल्नुपर्ने पनि प्रावधान छ ।
काग अत्यन्त चतुर र चलाख पक्षी हो । काग सर्वभक्षी प्राणी हो । यसको पूजा गर्नुका विभिन्न कारण छन् । कागले सबैलाई समान दृष्टिले हेर्छ भने यसले अन्न बालीमा लाग्ने कीरा–फट्याङग्राहरू खाइदिन्छ । कागलाई यमराजको सन्देश सुनाउने यमदूतका रूपमा पनि लिइन्छ । काग यमराजको अत्यन्त प्रिय भक्त पनि हो । समाचार बहाक काग का, का का, गरेर कराउँछ ।
कराएपछि ‘सुबोल बोल, ठाउँ सारी सारी बस्, शुभ समाचार दे’ भनिन्थ्यो । कौवा दक्षिणमा उडे हानि, पश्चिममा उडे दुःख, पूर्वमा उडे लाभ र उत्तरमा उडे कीर्ति फैलिने खालको समाचार रहेछ भन्ने विश्वास गरिन्थ्यो ।
चराविद् हेमसागर बरालका बुझाइमा, ‘तिहारमा गरिने कागको पूजा नै सम्पूर्ण चराचुरुंगीप्रतिको प्रेम हो ।’
घरबाट फालिएका र गाउँ–सहरमा थुप्रिएका फोहोर सफा गरेर वातावरणीय स्वच्छतामा सघाउ पुर्याउन कागले मद्दत गर्छ । कागले एक पटक चिनेको अनुहार हत्तपत्त नर्बिसने अध्ययनले देखाएको छ। बरालका अनुसार काग आफैंमा एउटा सूचना संवाहक पनि हो। यसले अन्य प्राणीहरूलाई पनि सूचना दिन्छ । जंगलमा हिंस्रक जनावर देख्दा कागले आवाज निकालेर अन्य जीवजन्तुलाई खतराको पूर्वसंकेत दिन्छ । कुनै प्राकृतिक विपत्ति आउने बेलामा यसले अनौठो व्यवहार देखाउने र अनौठो आवाज निकाल्ने काम गर्छ ।
कुकुर तिहार यमपञ्चकको दोस्रो दिन अर्थात् कार्तिक कृष्ण चतुर्दशीका दिन मनाइन्छ, जसका सम्बन्धमा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक मान्यता रहँदै आएको छ कतिपय जानकारहरुले ‘द्वौ श्वानौ श्याम शवलौ वैवश्वत कुलोद्भवौ । ताभ्यामन्नं प्रयच्छामि स्यातामेता बहिंसकौ ।’ भन्ने मन्त्र पढ्दै पूजा गर्ने गर्छन् । कुकुर तिहारको पूजामा लागि फूल, अक्षता, माला तथा मिष्ठान्न भोजनले यस दिन घरमा पालेका कुकुर तथा कुकुर नपाल्नेहरूले बाहिरका कुकुरको पूजा गरी टीका तथा माला लगाइदिएर मीठा–मीठा खानेकुरा ख्वाउने चलन छ ।
यो दिनलाई नरक चतुर्दशी पनि भनिन्छ । कुकुरलाई पनि यमदूतका रूपमा लिइन्छ । कुकुर यमराजको अर्को प्रियभक्त हो । कुकुरलाई आज्ञापालक एवं रक्षक मात्र मानिँदैन, विभिन्न अपराध गर्ने अपराधीहरू पत्ता लगाउने, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि कुकुरले गर्छ । कुकुरले घर को रेखदेख तथा चोर–डाँकाबाट बचाउने कार्य गरी मानिसलाई सहयोग गर्दै आएको छ । यसरी सुरक्षाका दृष्टिले पनि कुकुर हितकारी छ । आजपर्यन्त कुकुर लोकप्रिय घर पालुवा जनावरका रूपमै छ । यस्तो गुनिलो जनावरलाई मान्छेले पूजा गर्न गर्नुको साँस्कृतिक अर्थ छ ।
त्यसैगरी कुनै प्राकृतिक प्रकोप तथा दैवी विपत्ती हुने बेलामा पूर्वसूचना समेत दिन्छ । डा जगमान गुरुङ भन्नुहुन्छ–कुकुर तिहारको आफ्नै सांस्कृतिक अर्थ छ, जसले सिकारी युगको समयलाई संकेत गर्छ । कुकुरको घ्राण शक्ति उम्दो हुन्छ । यसको प्रयोगले सिकार गर्न मानिसलाई सजिलो हुन्थ्यो । झकुकुरलाई भैरव को बाहन पनि भनिन्छ । त्यसैले हामी कुकुर तिहारमा कुकुरलाई मन पर्ने खाना ख्वाई पूजा गरी माला लगाइदिन्छौँ ।
गाईतिहार र लक्ष्मी पूजा कुनै पनि धार्मिक वा सामाजिक संस्कार गर्नु अघि गाई को गोबर ले घर–आँगन लिपपोत गर्ने, गाईको गहुँत सबैतिर छर्केर आफ्ना घर–कोठा–चोटा पवित्र तुल्याउने हिन्दू हरूको संस्कार छ । यस दिन लक्ष्मीलाई धनधान्यकी देवी र गाईलाई गौमाता मानेर पूजा गरिन्छ । प्रार्थना गर्दा ‘लक्ष्मीर्या लोकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता घृतं वहति यज्ञार्थे मम पापं व्यपोहतु भन्ने मन्त्र पढ्नु पर्दछ । त्यस्तै खाने कुरा दिँदा’, सुरभिर्वैष्णवी माता नित्यं विष्णुपदेस्थिता । गोग्रासं च मया दत्तं त्वं गृहाणानुकम्पयाु भन्ने मन्त्र पढ्नुपर्ने शास्त्रीय मान्यता छ ।
गाईलाई पशुधनका रूपमा लिइन्छ । गाईको गोबरलाई मानिसले ‘एन्टिसेप्टिक’ का रूपमा प्रयोग गर्छन्रु। गाईले सूर्यबाट आउने विभिन्न हानिकारक विकिरणलाई सोस्ने काम गर्छरु। यसले वायुमण्डललाई स्वच्छ बनाउन मद्दत पुर्याउँछरु। गाईको गोबरबाट निकालिने गोबर ग्याँस एक प्रमुख जैविक इन्धन हो। हिन्दूहरू गाईलाई लक्ष्मी र गौमाताका रूप मान्छन् ।
गाईजात्रा, गाईपाला, गाईप्राणी, गौप्राणी आदि शब्दले गाईमा आधारित विविध प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान गर्छ ।
नेपालमा यसलाई यमपञ्चकको एक भागको रुपमा मनाइन्छ । वर्षका चार महत्वपूर्ण रातहरूमध्ये लक्ष्मीपूजाको रातलाई सुखरात्रि भनिन्छ । दीपावलीमा ‘तमसोमा ज्योतिर्गमय’ अर्थात् अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ लागि आफूलाई आत्मिक रूपमा सुख–सन्तोष प्रदान गर्नुहोस् । भन्ने यो दिन चेलीबेटीहरू खासगरी स्त्री जाति विशेष गरी कुमारी केटीहरूले घरघरै गई भैलो खेलेर रमाइलो गर्ने चलन छ ।
गोरु तिहार, हल तिहार वा गोवर्धन पूजा तिहारको चौथो दिन वा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाको दिन मनाइन्छ । यस दिन गोरुको पूजा गर्न फूल, अबिर, केशरी, जौ, तिल, धूप, कपूर, चामलको पिठो आदि तयार गरी फूलको माला लगाई मीठा खानेकुरा तथा पिठो खान दिने चलन छ । बाली लगाउने प्राणीका रूपमा गोरुको सम्मानमा यो पूजा गरिन्छ । गोरु र हलोले खेत जोती आन्न फलाएर कृषिको बिकासमा र मानिसको जीवनमा क्रान्ति नै ल्याइदियो। त्यही भएर गुन तिर्न गोरुको पूजा गरेको हुनुपर्छ ।
गोबर्धन पर्वतको पूजा गर्दा ‘गोवद्र्धन धराधार गोकुलत्राणकारक । कृष्णबाहुकृतच्छाय गवां कोटिप्रदो भव’ भन्ने मन्त्र र बलिराजाको प्रर्थाना गर्दा ‘बलिराज नमस्तुभ्यं दैत्यदानववन्दित । इन्द्रशत्रोडमराराते विष्णुसान्निध्यदो भव’ भन्ने मन्त्र पढ्नुपर्ने विधान छ ।
भनिन्छ त्यसै समयदेखि गोवर्धन पूजाको आरम्भ भएको हो । संस्कृत मा गौ भनेको गाई हो । त्यसैले गोवर्धन, गोकुल, गोपाल यी शव्दहरूले त्यस बेलाको समाजमा गाईलाई दिइएको सम्मानलाई प्रष्ट्याउँछ । नेवार समुदायले यहि दिन आफ्नो शरीरलाई पुजा गरी म्हपुजा मनाउँछन् । आत्मा सन्तुष्ट भए देवता खुशी हुन्छन् र सबै काम फलिफाप हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म्हः पूजा गरिँदै आएको छ । परिवारमा मुलीले परिवारका सबै सदस्यहरुको म्ह अर्थात शरिरको पुजा गरी हाँस वा कुखुराको फुल सगुन अर्पण गरिन्छ ।
यसै दिन देखि पुरुषहरुले देउसी खेली व्यापक रमाइलो गरि तिहार मनाउने गरिन्छ । परम्परागत देउसी हराउदै जादैछ भने त्यसमा आधुनिकता पनि मिसिएको पाइन्छ । जे होस देउसीका कारण तिहारको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ ।
भाइतिहार (भाइ टीका) तिहारको वा यमपन्चकको अन्तिम दिन अर्थात् कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथिका दिन यो पर्व विशेष उत्साहका र महत्वका साथ मनाइन्छ । यो पर्व दिदीले भाइलाइ र बहिनीले दाजुलाई अनि
त्यसैगरी भाइले दिदीलाई र दाजुले बहिनीलाई विशेष मान–सम्मानका साथ विधिपूर्वक पूजाआजा गर्ने, मेवा–मिष्ठान्न आदि मनपर्ने कुरा ख्वाउने, दिदीबहिनीलाई दान–दक्षिणा एवं वस्त्र आदि दिने परम्परा छ ।
परापूर्वकालमा बहिनी यमुनाले यसै दिन आफ्नो भावना अन्तर्निहित गरेको पाइन्छ । दाजु यमराज लाई विशेष मान–सम्मान गर्दै भाइपूजा गरेको धार्मिक महत्व छ । यमराजको प्रार्थना गर्दा ‘धर्मराज नमस्तुभ्यं नमस्ते यमुनाग्रज । पाहि मां किङ्करै साद्र्धं सूर्यपुत्र नमोडस्तुते’ भन्ने मन्त्र पढ्न पर्दछ ।
यमपञ्चकका पाँच दिन यमराजले यमुनाको घरमा बास गर्छन् भन्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास छ । यी पाँच दिन इन्द्रादि दश दिक्पालले राजा बलि का लागि आफ्नो राज्य छाड्ने कथा पनि पाइन्छ । भाइ तिहारको दिन दियो, कलश र गणेशको पूजा गर्ने, यमराजको आह्वान गर्ने, बिमिरो, ओखर, तेल, मखमलीको माला, दूबोको टीका, कटुस आदिको प्रयोगमा आफ्ना दिदीबहिनी र दाजुभाइको सुख–समृद्धि, अरोग्य एवं दीर्घायूको कामना अन्तर्निहित छ । लामो समयसम्म भेटघाट नभएका दाजुभाइसँग भेटघाट हुने, सम्बन्धमा आएको चिसोपन हटाई मिलन गराउने तथा सम्बन्धलाई अझ दिगो बनाउने माध्यमका रूपमा यसलाई लिइन्छ ।
यमपञ्चकको पाँचौं दिन भाइटीका पर्छ । दिदीबहिनीले भाइटीकाको अघिल्लै दिन दाजुभाइलाई भाइटीकाको निम्ता स्वरूप पान–सुपारी, फूल आदि दिने चलन छ । भाइटीकाका दिन टीका नलगाई केही खानु हुँदैन भन्ने मानिसहरूको विश्वास छ । टीकाको दिन बिहानै नुहाएर अष्टचिरञ्जीवीको पूजा गर्नुपर्छ । यमराज, हनुमान्, विभीषण, परशुराम अष्ट चिरञ्जीवी भित्र पर्छन् ।
भाइटीका गर्न ओखर, तोरीको तेल, बिमिरा, मसला, मखमली, दूबो तथा सयपत्रीको माला, रोटी, मीठा–मीठा परिकारको आवश्यकता पर्छ । सबैभन्दा पहिले दियो, कलश तथा गणेश को पूजा गरी बिमिराको पूजा
गरिन्छ । त्यसपछि दाजु–भाइको मङ्गलको कामना गर्दै ढोकामा ओखरको तथा यमराजको पूजा गरी कालको बाटो छेक्नुपर्छ । पानी तथा तेलले ७ घेरा हाली दाजुभाइलाई छेक्नुपर्छ । फूल, अक्षता, चन्दन तथा लाभाले पूजा गरी दाजुभाइको शिरमा तेल लगाइदिनुपर्छ । सगुनका रूपमा दही दिनुपर्छ । भाइटीकाका दिनमा दाजुभाइलाई लगाइदिने मखमली, सयपत्री तथा दूबोको मालाको छुट्टै महत्व छ । मखमली कहिल्यै ओइलाउँदैन, सयपत्रीको
रङ्गकहिल्यै उडेर जाँदैन भने दूबो सधै हरियै रहन्छ ।
दिदीबहिनीले दाजुभाइको यश, आरोग्य, दीर्घायूको कामना गर्दै निधारमा सप्तरङ्गी टीका; पहेंलो, नीलो, सुन्तला रङ्गको, सेतो, हरियो, रातो र कालो सात रङ्गका टीकालाई निधारमा उर्द्ध्वाकार रेखामा सिधा लगाइन्छ । सप्तरङ्गी टीकामा भावना मिसिंदा शान्ति बर्षिन्छ ।
दाजुभाइप्रतिको प्रेम रङ्गजस्तै गाढा तथा निरोगी भैरहने विश्वास गरिन्छ । पूजा–पाठ पछि टीका थाप्दा आत्मामा धेरै आनन्दानुभूति प्राप्त हुन्छ । दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई ढाकाको टोपी लगाइदिन्छन् । यसले आयु बढाउनुका साथै राष्ट्रियता झल्काउँछ । टीका लगाइदिएपछि दिदीबहिनीले उपहार दिन्छन् भने दाजुभाइले पनि आफ्नो गच्छेअनुसार वस्त्र तथा दक्षिणा आदि प्रदान गरि भाइटिका पर्व धुमधामसँग मनाइन्छ ।
समग्रमा हेर्दा तिहारका गतिविधिले हाम्रा संस्कार र सभ्यताको सांगोपांगो झल्को दिन्छन् । यो चाँडले सत्य र असल कार्यका लागि बत्तीजस्तै प्रज्जवलित हुन हामी सबैलाई प्रेरित गर्छ । यसले आपसी मेलमिलाप, सद्भभाव, स्नेह,प्रेम र प्रकृति पूजा सिकाउँछ । तर तिहार मनाउँदै गर्दा यसको मर्म बुझ्नु र जीवनमा त्यसको सन्देस र महत्वलाई अनुसरण गर्नु बान्छ्निय हुन्छ । यहाँहरु सबैलाई तिहारको हार्दिक शुभकामना !!